Mahara maapplication ekugadzira. Maitiro ekusarudza iyo chaiyo | Linux Vakapindwa muropa
Mahara maapplication ekugadzira. Nzira yekusarudza chaiyo
Imwe yehurukuro dzakasarudzika mu software yepasirese ndeyekuti iyi kana iyo yemahara kana yakavhurwa sosi software application ndiyo imwe nzira inoshanda kune yeimba. Ndanga ndichiomerera, pasina budiriro, kuti tirege kusimudzira chirongwa ichi se "kutsiva kwe ..." uye titange kutaura nezve kunaka kwayo.
Somuenzaniso, Iyo Gimp inotibvumidza isu kuti tigadzire zvinyorwa zvedu muPython. Kana iwe uine ruzivo rwemutauro wepurogiramu iyi, uye yemasvomhu inoshandiswa mukunyengedza mifananidzo (ruzivo rwese rwakakosha rwuri paInternet) iwe unogona kuwedzera mashandiro ayo kupfuura zviroto zvemumwe mushandisi wechikumbiro chakabhadharwa.
Iyo Achilles chitsitsinho chemahara uye yakavhurwa sosi software mapurojekiti yaigara iri zvinyorwa. Kusarongeka, kwechinyakare uye kazhinji kusakwana, ndicho chaive chipingaidzo chikuru mukubvumidzwa kwemahara kwemahara mafomu.
Sezvinei zvishoma nezvishoma izvo zviri kuchinja. Mune zvinyorwa zvekusiyana kwakasiyana kweLinux isu takanyora zvinyorwa zvekugadzira izvo zvinonyanya kubatsira kune vese amateurs uye nyanzvi.
1 Mahara maapplication ekugadzira. Ungasarudza sei chishandiso chekushandisa
1.1 Pixels uye mafomula
Mahara maapplication ekugadzira. Ungasarudza sei chishandiso chekushandisa
Nzira yakanakisa yekuziva kuti ndechipi chishandiso chekushandisa mune yega kesi, kusiyanisa nemhando ipi yemifananidzo yatiri kuzoshanda.
Raster mifananidzo inogadzirwa nezvirongwa zvinoshanda nemapikiseli kana kutorwa nekamera kana scanner. Ivo vanochengetwa mumafomati senge jpg, gif, png, uye ivo vanoshandiswa pawebhu uye mumagwaro akagadzirwa ekuona pachiratidziri. Mamwe mapurogiramu atinogona kushandisa nemhando iyi yemifananidzo ndeaya: Iyo Gimp, choko, GrafX2 y TuxPaint.
. Vector mifananidzo inogadzirwa neyakajeka software, uye Iwo akakodzera kumifananidzo inozoiswa kune chaicho chigadzirwa. Izvo zvinoshandiswa zvakare muCAD, mainjiniya, uye 3D mifananidzo. Dzimwe nzira dzakavhurika sosi ndeidzi: Inkscape, LibreOffice Dhirowa y FreeCAD
Gadzira mufananidzo nechirongwa che raster inogona kufananidzwa nekupenda nebrashi. Rudzi urwu rwemifananidzo runotsigira kusanganisa kwemavara. Kune rimwe divi, kana uchishandisa vector dhizaini chirongwa rondedzero yezvimiro inotorwa. Aya maumbirwo anonzi zvinhu anoratidza chete ruvara rumwe chete.
Izvo zvinokwanisika kugadzira mifananidzo yakafanana yemhando mbiri idzi. Chero bedzi ivo vasingasanganisi kusanzwisisika kwemavara misiyano sevheji giraidhi inoda kuti pave neichi chimiro chevaravara rega rega.
Mamwe mapikicha ekugadzira gadziriso anogadzirisa dambudziko iriumando mukana wekupinza raster mhedzisiro. Iyi mhando yemifananidzo haizokodzere maitirwo anoda 100% vector zvemukati sekucheka kana kunyora.
Mifananidzo iwo mifananidzo ye raster uye yavo kutendeuka kuve vector fomati haizove neyakaenzana mhando
Pixels uye mafomula
Raster mifananidzo zvakavakwa kubva pamapikiseli. Pixel ndiyo poindi kana chinhu chidiki pane chechigadzirwa. Kana isu takatarisa pane raster mufananidzo tichaona yakawanda yemakwere madiki. Vector mifananidzo Izvo zvakavakwa kubva pamasvomhu kuverenga kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe iyo inogadzira mitsara uye maumbirwo. Kana isu takatarisa pane vector graphic ichagara ichitaridzika zvakafanana.
Mufananidzo we raster une yakatarwa nhamba yemapikisheni. Kana iyo faira remufananidzo rikakwidziridzwa pasina kushandura huwandu hwemapikisheni, mufananidzo uchave wakasviba. Kunyangwe zvichikwanisika kuyedza kugadzirisa izvi nekuwedzera iyo nhamba yemapikisheni, sezvo izvi zvinowedzerwa zvisina kujairika mumufananidzo, mhedzisiro yacho kazhinji haina kunaka.
Kana isu tichiwedzera vector graphic, masvomhu mafomula anogara akafanana, saka kuratidza mhando kunochengetwa. Vector mifananidzo inogona kuyerwa kune chero saizi pasina kurasikirwa nehunhu.
Mukupedzisa, kana tichizogadzira graphic zvemukati kuti titarise pachiratidziri chine mavara mazhinji, zvakanakisa kushandisa raster mifananidzo, nepo kana tichida zvemukati zveimwe tsigiro, iyo inoda kunyatsoita uye isingade mavara mazhinji chinhu chekuita kushanda nemavheji mifananidzo.
Muchinyorwa chinotevera tichakurukura zvakadzama dzimwe sarudzo dzekuvhura sosi yekushandisa dhizaini
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mahara maapplication ekugadzira. Nzira yekusarudza chaiyo